Powder Peptide Oyster - Orinasa mpamatsy mpanamboatra
Ny peptide oyster dia misy proteinina, vitamina, antonony microelement ary turbine. Ankoatr'izay, misy maromaro …….
Lahatsary peptide Oyster
Ozika peptide Specifications
Product Name Ozika peptide
molekiolan'ny Formula N / A
molekiolan'ny Wvalo N / A
Color Off-fotsy hatramin'ny mavo Powder
Solubility Ahitàna rano 100%
Application Fisotroana, fanampiana ara-pahasalamana ho an'ny lehilahy, Famenonan'ny lahy sy ny vavy, famenon-tsakafo, sakafo ara-pahasalamana, sns.
Famintinana peptide Oyster
Ny peptide Oyster dia misy proteinina, vitamina, antonony amin'ny microelement sy turbine. Ankoatr'izay dia mirakitra ny mahavelona mahavelona azy izay ananan'ny ranomasina. Ny turbine dia mety hampihena ny tavy ra, hanakana ny fitambaran'io takelaka, hanatsara ny hyperlycaemia, hanatsara ny tsy fahatomombanan'olombelona ary mampitombo ny metabolism. Amin'izany, ny turbine dia mihatra betsaka amin'ny vokatra ara-pitsaboana. Noho izany, ny peptide oyster dia mampiseho fiantraikany lehibe amin'ny fisorohana ny arteriosklerosis, ny aretina mitaiza, ny aretina amin'ny coronary, angina, hyperlipemia, aritmia, diabeta mellitus, hepatitis tony, tsimokaretina hypo.
Ankoatr'izay, ny peptide oyster dia misy fiantraikany amin'ny aphrodisiac semeniferous lahy. Afaka mahasitrana ny tsy fahampian'ny spermacrasia vokatry ny tsy fisian'ny sperma. Ankoatr'izay, ny katsentsitra dia matsiro dia tsara ho an'ny aretin'ny menopause vehivavy, ny fihanaky ny vatan'ny tanora sy ny ante partum na ny fahalemen'ny postpartum.
Inona ny Ozika peptide?
Ny Oysters dia tsy vitan'ny hoe be proteinina, vitamina A, B1, B2, B5, C, E ho an'ny singa trace mety (toy ny kalsioma, vy, zinc, selenium, manganese, varahina, sns) ary taurine, fa misy koa fiainana an-dranomasina tsy manam-paharoa ny menaka isan-karazany.
Oyster Peptide dia vita amin'ny henan'alika amin'ny alàlan'ny teknolojia hydrolysis bioenzymatic maoderina, ary avy eo amin'ny alàlan'ny fisarahana, fanadiovana, ny deodorization ary ny fanamainana ny famafazana sy ny sisa. Ny vokatra dia maizina mavo sy vita amin'ny vovony, izay mitazona tanteraka ny akora bioaktif mahery vaika. Mahafinaritra azy ary azo ahena tsara sy tsy misy fiatraikany.
Ny Oyster Extract dia manome loharano voajanahary glycogen, phospholipids, vitamina an-dranomasina ary mineraly ary loharano manan-karena amin'ny taurine asidra amine. Ny fitrandrahana oyster dia heverina ho ilaina manokana amin'ny fanadiovana ny vatana sy ny atiny, amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny tsiambaratelon'ny afile ary manatsara ny asany. Ny fitrandrahana oyster koa dia nampiasaina nandritra ny taonjato maro ho toy ny aphrodisiac hanatsarana ny hery fiterahana ho an'ny lehilahy. Ny fitrandrahana oyster koa dia nampiasaina nandritra ny taonjato maro ho toy ny aphrodisiac hanatsarana ny hery fiterahana ho an'ny lehilahy.
Ny vovony peptide Oyster dia mahazo tombony
Hampitomboana ny firaisana ara-nofo lahy
Oyster Peptide vovoka dia afaka manatsara ny fomba ara-nofo amin'ny lahy sy ny vavy. Mandritra ny fibaikoana ny asan'ny fiasan'ny vatana sy ny fanatsarana ny fiasan'ny sakafo roa tonta an'ny vatana.
Ny peptide oyster dia misy arginine betsaka tsy ilaina, ary ny singa Zinc. Ny peptides Oyster dia afaka manatsara ny fiasa ara-nofo. Firaisana ara-nofo, tsy fahampiana, fitomboan'ny prostate, hypoplasia ara-pananahana ary aretina hafa lahy, amin'ny tranga maro, noho ny antony tsy dia ampy mitarika an'i Azia mitarika.
Arovy ny aty.
Ny fitrandrahana ny vovo-dronono dia misy fiantraikany tsara amin'ny fiarovana ny ratra amin'ny fanandramana, afaka mampihena ny votoatin'ny serum ALT / AST amin'ny voka-miady amin'ny ati-doha amin'ny alàlan'ny CC14 ary mampihena ny haavon'ny ratra sela.
Ny peptide Oyster ao anaty polysaccharides oyster dia afaka manatsara ny hery fiarovana, manakana ny andraikitry ny fihanaky ny virus influenza.
Ny hypoglycemic fananana katsila miaraka amin'ny sulfonylurea sy ny biguanide antidiabetic zava-mahadomelina.
Fisorohana aretim-po sy cerebrovascular aretina.
Ny glycosaminogly amin'ny oyster dia afaka miaro amin'ny fahasimban'ny oxidative ny sela endothelial vascular nateraky ny hydrogen peroxide, ary afaka misoroka tsara ny fisian'ny aretina kardiazy toy ny hypertension, arteriosclerosis, stroke ary ny toy izany noho ny ratra endothelial vaskular.
Ny peptide voajanahary voajanahary Oyster (BPO) dia mahomby amin'ny fanakanana ny fihanaky ny homamiadan'ny homamiadana BCC-823, sela misy kankana manan-danja vokarina apoptosis.
Ozika peptide vovony fampiasana ary fampiharana
Ampiharina amin'ny sehatry ny vokatra ara-pahasalamana, noho ny fiantraikany betsaka amin'ny pharmacological dia ampiasaina ho toy ny fitsaboana fitsaboana
Ampiharina eo amin'ny sehatry ny kosmetika, ivy ho toy ny fitaovana akora amin'ny vokatra fikarakarana hoditra dia mivoaka amin'ny tsena.
Ny vovon-tsolika Ouster peptide dia nampiharina tamin'ny zava-pisotro, famenon-tsakafo ho an'ny lehilahy, famenon-tsakafo ho an'ny lahy sy ny vavy, Sakafo ara-pahasalamana, sakafo addtive, sns.
Oyster peptide vovoka fikarohana bebe kokoa
Ny fanadiovana ny fiangonana
Taurine ho an'ny peptida atherosclerosis vokarin'ny kongresy, ary ny angina pectoris mitarika, ny fitrandrahana miokaretina, ny fiterahana serebral dia misy fiantraikany tsara.
Ao amin'ny peptide oyster misy asidra amine izay afaka manatsara ny fiasan'ny atiny, manakana ny fanangonana asidra laktika, hanampiana haingana ny fanarenana sy ny fampiroboroboana ny harerahana amin'ny vatana. Ankoatr'izay, ny tauterina peptide sy ny glycogen dia tsy vitan'ny manampy amin'ny famerenenan'ny harerahana ara-batana ihany, fa koa ny faharerahana ara-tsaina ho sitrana dia tena mandaitra, ny andraikitry ny fampivoarana ny fiteren'ny endogen sy ny fanarenana ny fahitana dia nekena.
Ny Oyster dia afaka misoroka ny hoditra maina ary mampiroborobo ny metabolismin'ny hoditra, fatiantoka melanin amin'ny hoditra, mamokatra hoditra marefo. Satria afaka mampiroborobo ny fananganana sy ny tsiambaratelon'ireo hormonina, ny fanitsiana ara-batana, tsy misy ny soritr'aretin'ny fitondrana vohoka, ny aretin'ny menopausal. Ho fanampin'izany, ny ioda sy ny tryptophan amin'ny ozika dia afaka manampy anao mampitombo volo mainty tsara tarehy.
 Ny tsimatimanota matory. Wang L et al. Dev Comp Immunol. (2018)
 Ny vokatry ny immunomodulatory ny peptide ozy amin'ny mosa immunosuppressed] Xu D et al. Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. (2016)
 Ny fampahafantarana sy ny fisintonana ny fanoherana ny α-thrombin misy peptide anticoagulant novolavola nalaina tamin'ny proteinina oyster (Crassostrea gigas). Cheng S et al. Sakafo ara-tsakafo. (2018)
 Ny henan'omby-hydrolyzed alcalase (Crassostrea rivularis) dia manatsara ny hetsika antioxidant sy aphrodisiac amin'ny totozy lahy. Zhang Z, Su G, Zhou F, Lin L, Liu X, Zhao M. Food Res Int. 2019 Jun; 120: 178-187. doi: 10.1016 / j.foodres.2019.02.033. Epub 2019 Feb 20.
Afaka manatsara ny fiasan'ny lahy ve ny peptides oyster?
Vovoka Ginseng Oligopeptides
Vovon-tsolika peptide collagen taolana bovine
Vovon'alika Gigardard-membrane Oligopeptide